राजपा र राप्रपका अध्यक्षद्वय डा. भट्टराई र थापाबिच सामाजिक सञ्जालमा चल्यो दोहोरी
- नेपाली सन्देश बुधबार, कार्तिक २६, २०७७ , 2.7K जनाले हेर्नुभयो
कार्तिक २६ पोखरा । राष्ट्रिय जनता पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाबीच सामाजिक सञ्जालमा दोहोरी चलेको छ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई लिएर उनीहरुले एक अर्का लाई सवाल जावफ गरेको छन ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई विदेशी षड्यन्त्र भनि व्यक्त गरेको विचारमाथि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले षड्यन्त्र नभई गोयबल्स शैली भएको बताएका छन्।
अध्यक्ष थापालाई मेन्सन गदंै डा. भट्टराइले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन, ‘मेरा सहपाठी मित्र कमल थापाले गोबल्सको दुष्प्रचार–सूत्र ‘झुटोलाई सय चोटि दोहोर्याए पछि सत्य बन्छ’ को अनुशरण गर्दै पुनः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतालाई विदेशी षड्यन्त्र भनेछन् , क्रान्तिका अगुवा प्रचण्ड–बाबुरामहरू जिउदो छदै यस्तो झुट बोल्नु ‘देख्नेको अगाडि सुन्नेको सही’ भएन र?’
यसको जवाफमा राप्रपा अध्यक्ष थापाले प्रचण्ड–बाबुरामले क्रान्तिको भारी बोके पनि उनीहरु मालिक नभएको बताएका छन् । उनले सुरुमा प्रचण्ड–बाबुरामको कुरा सबैले पत्याए पनि पछि सक्कली मालिकले दावा गरेको भन्दै बालहठ नदेखाउन भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन्।
अध्यक्ष थापाले लेखेका छन्,‘क्रान्तिको’भारी’ नेपालमा तपाईंहरूले बोकेर ल्याएको हो । त्यसमा कुनै विरोध छैन । तर,त्यो भारीको मालिक तपाईंहरू होइन, सुरूमा हो कि भनेर सबैले पत्याएका पनि थिए। तर, जब सक्कली मालिकले भारीको दावी गरेपछि त्यसमा तपाईले बालहठ नदेखाएकै बेश’ ।